RASMI: Olivier Giroud oo dhammaystiray ku biiristiisa Kooxda AC Milan, kaddib markii uu ka tagay Chelsea… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa Rossoneri?) - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
RASMI: Olivier Giroud oo dhammaystiray ku biiristiisa Kooxda AC Milan, kaddib markii uu ka tagay Chelsea… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa Rossoneri?)
By admin July 17, 2021 49
(Milan) 17 Luulyo 2021. Olivier Giroud ayaa dhammaystiray ku biiristiisa Kooxda kubadda cagta AC Milan, kaddib markii uu ka tagay naadiga Chelsea.
Weeraryahanka reer France ayaa ka mid noqday Rossoneri sida ay goordhow xaqiijisay kooxda AC Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga.
“AC Milan waxa ay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo saxiixa Olivier Jonathan Giroud, kaasoo heshiis joogto ah aan uga soo qaadannay Chelsea FC, Weeraryahanka Faransiiska ah ayaa noo xiran doona Maaliyadda lambarka 9-aad.” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay Kooxda AC Milan.
Waxa uu ku dhashay Chambéry oo dhacda France 30-ka bishii September ee sanadkii 1986-kii, Olivier Giroud waxa uu heerkiisa dhallinyaronimo ee ciyaaraha ku soo qaatay Grenoble, isagoo kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda waa weyn saftay sanadkii 2005.
Kaddib markii uu u ciyaaray Istres iyo Tours, Giroud ayaa u dhaqaaqay kooxda Ligue 1 ee Montpellier halkaasoo uu ku dhaliyey 39 gool 85 kulan oo uu u saftay labo sanadood, waxaana uu kula guuleystay horyaalka fasal ciyaareedkii 2011/12.
Kaddib waxa uu u dhaqaaqay Kooxda Arsenal, halkaasoo uu ku dhaliyey 105 gool 253 kulan oo uu u ciyaaray, isagoo kula guuleystay Gunners 3 FA Cup iyo 3 Community Shield.
Waxa uu kaddib Giroud ku biiray Kooxda kubadda cagta Chelsea, halkaasoo uu ku dhaliyey 39 gool 119 kulan oo uu u ciyaaray Blues, waxaana uu la qaaday kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London, hal Champions League, hal Europa League iyo hal FA Cup.
Giroud ayaa xulka qaranka waa weyn ee Faransiiska u saftay markii ugu horreysay bishii November sanadkii 2011-kii, waxaana uu u dhaliyey xulka 46 gool 110 kulan oo uu u saftay, isagoo kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2018-kii.
Kooxda Manchester United oo isku diyaarinaysa inay dalab rasmi ah ka gudbiso Raphael Varane
Mid ka mid ah saxiixyada cusub ee Kooxda PSG oo laga helay Korona Fayras
Muxuu Carlo Ancelotti ka yiri guushii ay kooxdiisa Real Madrid ka gaartay Atlético Madrid??
Barcelona vs Bayern Munich: Isku aadka wareegga siddeed dhammaadka & Afar dhammaadka oo dhammaystiran
RASMI: Joshua Kimmich oo ku guuleystay abaal-marinta Difaaca xilli ciyaareedka ee Champions League